China 45 HRC Carbide 2 Flute Standard Length Ball Nose End Mills mpanamboatra sy mpamatsy | Mingtaishun
45 HRC Carbide 2 Flute Standard Length Ball Nose End Mills
Fitaovana mivaingana: Ampiasao ny YG10X miaraka amin'ny atiny 10% Co sy ny haben'ny voankazo 0.8um.
Coating: AlTiN, ny atin'ny aliminioma avo dia manome hamafin'ny hafanana sy fanoherana oksidasiana tsara.
Fandeferana ny savaivony farany: 1 ＜ D6 -0,010 ～ -0,030; 6 ＜ D≤10 -0.015 ～ -0.040; 10 ＜ D20 -0.020 ～ -0.050
Ny famolavolana roa sosona dia manatsara ny fahamendrehana sy ny famaranana amin'ny fomba mandaitra. Ny fanapahana ny sisin'ny afovoany dia mampihena ny fanoherana. Ny fahaizan'ny junk slot dia manome tombony amin'ny fanesorana ny puce ary mampitombo ny fahombiazan'ny milina. Ny famolavolana flute 2 dia tsara amin'ny fanesorana puce, mora amin'ny fanodinana feed vertika, be mpampiasa amin'ny slot, profile, ary hole hole.
1) Rahoviana aho no mahazo ny vidiny?
Matetika izahay no mitanisa ao anatin'ny 24 ora aorian'ny nahazoanao ny fanontanianao.Raha maika be ianao hahazo ny vidiny, azafady miantso anay na lazao anay amin'ny mailakao fa hoheverinay ho laharam-pahamehana ny fanontanianao.
2) Ahoana no hahazoako santionany hijerena ny kalitao?
Aorian'ny fanamafisana ny vidiny dia azonao atao ny mangataka santionany hijerena ny kalitaonay. Raha mila santionany banga fotsiny ianao hijerena ny volavola sy ny kalitaon'ny taratasy, dia hanome anao santionany maimaimpoana izahay, raha mbola azonao ny entana mazava.
3) Hafiriana no azoko antenaina hahazoana ilay santionany?
Aorian'ny fandoavanao ny sarany santionany ary handefasanao rakitra izay voamarina, dia ho vonona halefa amin'ny 3-7 andro ireo santionany. Ny santionany dia halefa aminao amin'ny alàlan'ny express ary tonga amin'ny 3-5 andro fiasana. Azonao atao ny mampiasa ny kaonty anao manokana na mandoa anay raha tsy manana kaonty ianao.
4) Mandra-pahoviana ny fomba fiasa rehetra no vita?
Aorian'ny fametrahana baiko dia 45-60 andro eo ho eo ny fotoana famokarana. Mila 15 andro isika hanomanana ny entana rehetra avy eo 30 andro amin'ny famokarana.
5) Ahoana ny amin'ny daty fitaterana sy fandefasana?
Raha ny tokony ho izy dia ampiasainay ny fandefasana entana. Manodidina ny 25-40 andro izany. Io koa dia miankina amin'ny coutry sy seranan-tsambo misy anao. Mety ho fohy kokoa izany raha mila mandefa ny entana toa ny Aziatika ianao. Raha misy tranga maika dia afaka mandefa ny entana amin'ny alàlan'ny air express izahay, raha toa ka zakanao ny fandaniana amin'ny fivezivezena.
6) Orinasa mpivarotra sa manufaturer ianao?
Mpanamboatra matihanina izahay. Tsy manana ny ozinina fampitaovana fotsiny isika fa manana ozinina gazy karbôna simenitra ihany koa.
7) Aiza ny orinasa misy anao?
Ao amin'ny Weishanhu Road 100, Xixiashu Town, Distrika New North, Changzhou City, Jiangsu, Shina no misy anay.
8) Hafiriana no azoko antenaina hahazoana ilay santionany?
9) Ahoana ny amin'ny tahirinao?
Manana vokatra be dia be amin'ny tahiry izahay, ny karazany sy ny habe mahazatra dia ao anaty tahiry avokoa.
10) Azo atao ve ny mandefa maimaim-poana?
Tsy manolotra serivisy fandefasana maimaimpoana izahay. Afaka mahazo fihenam-bidy izahay raha mividy vokatra be dia be.
Teo aloha: HRC45 Carbide fenitra halavany fandavahana
Manaraka: 45 HRC Carbide 2 Flute Standard Length Ball Nose End Mills ho an'ny aliminioma
45 HRC Carbide 2 Flute standard halavan'ny baolina ...